cloud Archives - Saturngod
Copy , Another Cloud Storage
Posted on Updated July 2, 2014 April 28, 2013 by saturngod
သင့်ရဲ့ Dropbox ပြည့်သွားလို့ Sync လုပ်လို့မရတော့ဘူးလား ? ဒါမှမဟုတ် space ပိုများပြီး free ရတဲ့ storage ကို ရှာနေတာလား ? ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Copy.com ကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Copy.com က dropbox လိုမျိုး cloud storage တစ်ခုပါ။ Storage space ကို Registration လုပ်လုပ် ခြင်း 5GB 15GB ပဲ ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Referral link နဲ့ လုပ်ရင် user အသစ် က 5GB ရပြီးတော့ link ပေးတဲ့ လူက နောက်ထပ် 5GB ရပါတယ်။ ဥပမာ။ https://copy.com?r=8oVB4A နဲ့ register […]
Posted on Updated March 13, 2011 by saturngod
ကျွန်တော် Why SaaS ? ကိုတော့ ရေးပြီးပါပြီ။ Why SaaS ကို ရေးရခြင်း အဓိက အကြောင်းကိုတော့ Why Cloud Server ? အကြောင်းကို ရေးချင်တာကနေ အစပြုခဲ့တယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ SaaS တွေရဲ့ အောင်မြင်လာမှုမှာ Cloud Server က မပါမဖြစ် ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Cloud Server ဆိုတာ ဘာလဲ ။ ဘာလို့ Cloud Server ကို သုံးသင့်တာလဲ။ ဘာလို့ Cloud ကို စဉ်းစားသင့်တာလဲ။ Cloud Computing ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Cloud Server တွေကိုလို့ ပြောလိုက်ရင် ၂ မျိုး […]
Posted on Updated March 9, 2011 by saturngod
Software asaService , Platform As A Service တစ်ခုပြီး တစ်ခုပေါ်လာကြတယ်။ ကျွန်တော် Second Year လောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတုန်းက နောက်ဆိုရင် Online မှာ လူတွေ software တွေ ရောင်းစားလာလိမ့်မယ်။ PDA တွေနဲ့ နေရာအနှံ့သုံးလာနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲတုန်းက ရန်ကုန်မှာ HP ရဲ့ PDA iPaq ဆိုတာပဲ ရှိသေးတယ်။ လူတိုင်းလည်း ဝယ်မသုံးနိုင်သလို စိတ်လည်း သိပ်မဝင်စားဘူး။ သို့ပေမယ့် သူငယ်ချင်းက အဲဒီ PDA လေး ဝယ်တော့ တော်တော် စိတ်ဝင်စားသွားပြီး စမ်းကြည့်သေးတယ်။ PDA က နောက်ဆိုရင် နေရာ ပြောင်းလဲယူလာနိုင်တယ်လို့တောင် […]
How we use dropbox share ?
Posted on Updated September 6, 2010 by saturngod
ကျွန်တော် Dropbox နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ Dropbox ကို အခုတလော ကျွန်တော် အပါအဝင် တော်တော်များများ သုံးလာကြတာကို တွေ့ရတယ်။ နောက်ပြီး Dropbox public folder ထဲမှာ ထည့်ပြီး public link က direct download link က mediafire တို့4shared တို့ထက် download ချရတာ မြန်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ bandwidth limit မရှိတဲ့အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။ bandwidth limit ရှိနေရင် ကျွန်တော်တို့ share ချင်သလောက် share လို့မရပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
Posted on Updated April 6, 2010 April 6, 2010 by saturngod
Cloud ဆိုတာကလည်း နာမည်ကြီးနေတာ တော်တော်လည်းကြာလာပါပြီ။ Cloud နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူသုံးများတာကတော့ SAAS ပါပဲ။ နောက်ပြီး Amazone, Rackspace တို့လို cloud server တွေပေါ့။ Cloud ကိုလည်း ရုံးမှာ အဓိက သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Github , Google Docs , Protoshare , Clarizen , စတာတွေကို သုံးနေပါတယ်။ SAAS က အခုနောက်ပိုင်း တော်တော်လေး အသုံးများလာသလို online ဈေးကွက်အသစ်လည်း ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိသုံးနေတာက Dropbox နဲ့ Evernote ပဲ။ free ရတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ သဘောအကျဆုံး အချက်က offline ရတာပဲ။ […]